Windows7ကိုကိုယ်တိုင်တင်ကြရအောင် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Windows7ကိုကိုယ်တိုင်တင်ကြရအောင်
By နေမင်းမောင်12:50 AM64 comments
ကျွန်တော်ဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်ကို စားရေးတဲ့ဘက်ကို ပြန်လှည့်လိုက်ပါအုံးမယ်..တောင်းထားတာမေးထားလေး
တွေကို ချက်ချင်း Reply မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လဲနားလည်ပေးပါအုံးလို့ပဲ အရင်ဆုံးတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ.
ပြီးတော့သုံးနေတဲ့ သူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တာ အမှန်ပါပဲ..ဒါကကျွန်တော်က ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောပြတာပါ
ကွန်ပျူတာ ကိုကိုင်တွယ်အသုံး ပြုနေရတဲ့သူတိုင်း အတွက် Windows တင်တာလောက်ကိုတော့သိထားသင့်
တာအမှန်ပါပဲ..ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တစ်ခု ကြိုပြီးတော့ပြောချင်တာက ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို မလုပ်ခင်ထဲကအဆိုး
ဘက်ကိုကြို ပြီးတော့တွေးမထားစေချင်ပါဘူး..သူတောင်လုပ်လို့ အဆင်ပြေရင်ကိုယ်လဲ လုပ်လို့အဆင်ပြေရမှာ
ပဲဆိုတဲ့အသိလေးတော့ လူတိုင်းရှိစေချင်ပါတယ်..ကျွန်တော်အခု Windows တစ်တစ်ခုကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အ
လွယ်တကူ တင်တက်သွားအောင် အပိုင်း ( ၃ ) ပိုင်းနဲ့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်..ကျွန်တော်အခုပို့စ်လေးမှာတော့
Windows7တင်နည်းကိုအခြေခံပြီးရေးပေးသွားပါမယ်..ကျွန်တော်
၁.Windows မတင်ခင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ?
Windows မတင်ခင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ?
ကျွန်တော်တို့ Windows တစ်ခုမတင်ခင်အရင်ဆုံး ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့နည်း
Windows ISO ခွေကိုဒေါင်းလော့ချ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ မိမိတို့ ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ ISO ဖိုင်ကို Ultra ISO ကိုအ
နောက်တစ်ချက်က Windows အသစ်တင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ Destop ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေ ၊ ပုံတွေ
ဒီကောင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ PDF File နဲ့ရေးထားတဲ့ E-Book တွေကိုအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အသုံး
Video File တွေ Mp3ဖိုင်တွေကိုဖွင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Player တွေကိုတော့အောက်မှာတင်ပေးထားပါ
Gom Player and Skin Download
ကျွန်တော် လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် Internet ပေါ်ကနေဒေါင်းလော့ချတဲ့အခါ
အင်တာနက်ပေါ်မှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ မိသားစုများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နေရာဒေသဝေးကွာနေသော်
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Windows တင်မဲ့ Partation ကိုအရင်ဆုံး မှတ်ထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်..ဘာလို့လဲ
Windows တစ်ခုကိုဘယ်လို Install လုပ်မလဲ ?
အပေါ်ကအတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Windows7ကိုအလွယ်တကူတင်တက်သွားအောင် Windows
တင်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးထားပါတယ်..
Windows XP နဲ့ Windows Vista တင်နည်းစာအုပ်တွေကိုလဲအောက်ကလင့်တွေမှာတင်ပေးထားတာရှိ
ကျွန်တော် Bios ထဲက Advanced Bios Setting ကိုသွားပြီး Boot Setting ကိုကြေငြာပေးဖို့လိုပါတယ်.
Third boot device=Disable
ဆိုပြီးကြေငြာပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်..ဒါမှသာ Computer စဖွင့်ဖွင့်ခြင်း Post လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးလို့ Bios ကိုစစ်
တဲ့အခါမှာ First Boot က CD ROM လို့ကြေငြာပေးထားတဲ့ အတွက် CD ROM ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်..
အခုလိုမကြေငြာပေးဘူးဆိုရင် CD ROM က Windows ခွေကိုမဖတ်ပဲ အရင် Windows ပြန်တက်လာပါလိမ့်
မယ်..Boot Setting ကိုဘယ်လိုကြေငြာပေးရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာရှင်းပြပေးထားပါ
အရင်ဆုံး မိမိတို့ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ..Windows ပြန်တက်မလာခင် Key Board မှ Delete Key
ဆက်တိုက်နှိပ်ထားလိုက်ပါ..ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ BIOS ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်..အောက်မှာပုံနဲ့
တော့ပြပေးထားပါတယ်..Mother Board တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူမှာမဟုတ်တဲ့ Bios Setting ပုံစံချင်းလဲတူမှာမဟုတ်
BIOS Setting ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး Advanced Bios Setting ကိုဝင်လိုက်ပါ..ပြီးရင်အပေါ်မှာပြော
Third boot device=Disable ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ..ပြီးရင် Key Board မှ F10 ကိုနှိပ်ပြီး
Save လိုက်ပါ.. ပြီးရင်ကွန်ပျူတာကို Restart ချပေးလိုက်ပါ..
ကျွန်တော်တို့ Windows7ကိုစပြီး Install လုပ်ပါတော့မယ်..အရင်ဆုံး Windows ခွေကိုထည့်လိုက်ပါ..ပြီးရင်
Windows ကိုဘယ်လို Backup လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကလင့်လေးမှာ ရှင်းပြပေးထား
ဒါကတော့ Windows တင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ တော်တော်များများကြုံရတက်တဲ့ ပြသနာပါ..Windows တင်ပြီး
ရင် အသံမလာဘူးမလာဘူးဆိုပြီး ကြုံကြုံနေရတာတွေပါ.. ကျွန်တော် Windows7မှာအသံမလာဘူးဆိုရင်
ဒါကတော့ Bonus ပါ .. Windows7တင်ပြီးလို့ မသုံးတက်သေးဖူးဆိုရင်အောက်ကလင့်မှာ ဆရာအောင်လင်း
ရေးထားတဲ့ Windows7အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးပါအောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ Windows တစ်ခုကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တင်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေသွား
လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်..ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်ကြပါ..အခုအချိန်မှာ Windows တစ်ခုတင်ရင်အနည်း
ဆုံး ၅၀၀၀ ၊ ၁၀၀၀၀ လောက်ပေးနေရတဲ့အချိန်မှာ မိမိက Windows တင်တက်သွားမယ်ဆိုရင် မိမိတို့
သာမဟုတ်ပဲ မိမိတိုပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ၅၀၀၀ ၊ ၁၀၀၀၀ လောက်တော့သက်သာ
နတ်မင်း September 12, 2011 at 10:38 AM
အခုလို နည်းပညာများ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပဲ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်လဲ အသစ်သစ်တွေကို တင်ပေးနိုင်ပါစေ ဒီထက်အောင်မြင်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါစေ လိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက် တကယ့်ကို အသုံးဝင်စေပေမဲ့ မလိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက်လဲ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေလို့ ဆန္ဒပြု လျှက် ..ပါ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ခင်ဗျား..
thebird October 14, 2011 at 2:35 PM
အကိုရေ ကျေးဇူးပဲနော်... နည်းပညာတွေကို အခုလို ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ အတွက်ပေါ့...
အစစ အရာရာ အတွက် ကျေးဇူးပါ
panai November 17, 2011 at 2:36 AM
panai November 17, 2011 at 2:37 AM
zaw December 2, 2011 at 3:55 PM
Anonymous December 3, 2011 at 9:17 PM
Comment ရေးခဲ ပေမဲ့
တကယ် ကျေးဇူး ပါ
Augustine Sang December 16, 2011 at 9:36 AM
ohhhhhhhhh now I find this post. So thanks.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကို ၊ အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။
သန်းအေး December 22, 2011 at 12:23 PM
ကွန်ပျူတာကို ဘာအခြေခံ နကန်းတစ်လုံးမှ နားမလည်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အစ်ကိုတို့ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ၀င်းဒိုးကို
အဆင်ပြေပြေနဲ့တင်တတ်သွားပါပြီဗျာ..လိုအပ်ချက်လေးတွေတော့ ရှိနေပါသေးတယ်..ကျေးဇူးတက်ချက် ကတော့
maywin789 December 24, 2011 at 6:58 PM
Unknown December 26, 2011 at 11:05 PM
thank ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် မလုံလောက်ဘူးလို့
ထင်မိပါတယ်. တကယ်ကိုပညာရပါတယ်.. တင်ပေးထားတာ
တွေက တကယ့်ကို စေတနာပါပါ အသေးစိတ်တင်ပေးထားတာကို
တွေ့ရတဲ့အတွက် အားလုံးကိုယ်စား ၀မ်းသာမိကျေးဇူးတင်မိပါတယ်.
ကျနော်လည်းနောက်တော့ ပျက်နေတဲ့ ကျနော့်ကွန်ပျူတာပြင်ရဦးမာပါ..
mmit ကိုဖတ်ရင်နဲ့ သိခွင့်ရခဲ့တာပါ.. အခွင့်အရေးရှိမယ်ဆိုရင်/
ရင်းနှီးခွင့် ခင်မင်ခွင့်ရှိချင်ပါတယ်... ကိုမင်း.. komin2009@gmail.com
peter January 7, 2012 at 12:33 AM
peter January 7, 2012 at 12:34 AM
မြမြင်းမိုရ်အောင်.. January 7, 2012 at 5:14 AM
မြမြင်းမိုရ်အောင်.. January 7, 2012 at 5:16 AM
aungminmin January 10, 2012 at 9:06 AM
moethet January 27, 2012 at 10:14 PM
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ် အရမ်းလဲခင်သွားပြီး --ကိုယ်နေမင်းမောင် ဒီထက်မကမျှဝေနိုင်ပါစေ
v good bro !
ZY February 27, 2012 at 10:04 AM
ဒီpage ကို save လုပ်တာ save လို့မ၇လို့ပါ ဘာကြောင့်ပါလဲ .....ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
ZY February 27, 2012 at 10:05 AM
ME TOO!,bro.Plz help.
tpy March 13, 2012 at 12:16 AM
thank ko nay min maung very very thank ko nay.
ko zaw March 16, 2012 at 8:57 PM
24 March 20, 2012 at 1:13 AM
အခုလိုလေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွတ် အထူး ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား
zawzaw March 24, 2012 at 2:12 PM
ကျေးဇးတင်ပါတယ်အကိုရေ ကြိုးစားကြည်လို့က်ပါမယ်ပြီးရင်လေ windows xp မှာရော ဒီနည်းအတိုင်းတင်လို့ရမလား
လင်းလတ်ကြယ် March 28, 2012 at 7:58 PM
မိုးသက်စိုး April 8, 2012 at 8:01 PM
awaykalupar April 10, 2012 at 11:08 PM
အခုလို နည်းပညာတွေမျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကိုနေမင်းမောင် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
မင်းမင်း April 29, 2012 at 4:38 AM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကို.. Windows ကိုယ်တိုင်တင်ဖို့ဆီုတာတခါမှမတွေးဖူးပါဘူး အခုတော့အကို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုယ်တိုင်တင်လို့တတ်သွားပြီး အကိုနေမင်းမောင်ကိုကျေးဇူးတင်ရင်း အကို့ရဲ့နည်းဗညာတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာသင်ယူပါရစေ.....
ကျေးဇူအများကြီးတင်ပါတယ်နော် windows ၂ ခုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တင်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးလဲလိုချင်ပါသေးတယ်ကိုနေမင်းမောင်
မိုးချစ်သူ June 2, 2012 at 4:42 PM
အကိုရေတင်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစ်ကယ်လည်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာ အကိုရေ ကျွန်တော်အကူအညီတစ်ခုလောက်ထပ်တောင်းပါရစေဗျာ ကျွန်တော်VZO7ကိုမသုံးတတ်ဖူးဗျ အဲ့ဒါအရင်ဗားရှင်းလေးရှိရင်တင်ပေးစေချင်တယ်ဗျာ ကျေးဇူးပြုပြီး တင်ပေးပါအုံးဗျာ
ကိုသူရ June 26, 2012 at 8:27 PM
အကိုရေ..အခုကျနော်သုံးနေတာက windows xp ပါ...windows7ကိုပြောင်း
တင်မယ်ဆိုရင်ကော ပြောင်းတင်လို့ရပါသလား..ရတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာ
Upgrade နဲ့ Custom ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်ဟာကို ရွေးပေးရမလည်းခင်ဗျာ
အကိုရေ အခုကျနော်သုံးနေတာက ၀င်းဒိုး xp ပါ.. အဲဒါ ၀င်းဒိုး7 ပြောင်းတင်မယ်ဆိုရင်
တင်လို့ရပါသလား..ရတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ Upgrade နဲ့ Custom ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ဘယ်ဟာကို ရွေးပေးရမလည်း ခင်ဗျာ...
D2 July 9, 2012 at 7:33 PM
ကိုနေမင်းမောင်ရေ ကျေးဇုးပါဗျာ ကျနော်တော.ကုးထားလိုက်တယ်....
ဇော် July 15, 2012 at 7:21 PM
အစ်ကိုကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာမှာ ဝင်းဒိုးတင်တာ အိုကေတယ်အရင်က
အခုအစ်ကို ဝင်းဒိုးတင်လိုက်တာ အစ်ကိုဘယ်လိုမှတင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်..
အစ်ကို အဲဒီ copying windows file ကောပီးမကူးဘူးဖြစ်နေတယ် ဝင်းဒိုးတင်တိုင်းတင်တိုင်း ကောပီးမကူး ပဲနဲ့ကျော်သွားတယ် နောက်ပြီးရင် error တတ်လာတယ်..
ဘယ်လိုမှတင်လို့မရဘူး နည်းလမ်းလေးရှိရင်ကူးညီးပေးပါအုံး ကိုနေမင်းမောင် အားကိုးပါတယ်..
phyozayyarthein July 22, 2012 at 8:19 PM
partation kwe' nee ko ta chat laut shin pya par
myomin July 26, 2012 at 8:43 PM
တကယ် ကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ် ကို နေမင်းမောင် ... လူအများကို နည်းပညာတွေ မျှဝေတဲ့ အတွက် ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်လည်း ခင်ဗျားမသိသေးတဲ့ နည်းပညာတွေ လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ သိရှိခွင့် ရပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကို နေမင်းမောင် ...
thu September 7, 2012 at 4:14 PM
aungsan zarni September 12, 2012 at 3:35 PM
moekyaw September 13, 2012 at 6:32 PM
100 thank bro ကျေးဇူးကမ္ဘာ
moekyaw September 13, 2012 at 6:37 PM
Hla Aung September 19, 2012 at 8:47 AM
Hla Aung September 19, 2012 at 8:49 AM
Hla Aung September 19, 2012 at 8:52 AM
aungsan zarni November 4, 2012 at 5:58 PM
ဒီလောက် သေသေချာချာပြထားတာကို တစ်လွဲတွေလိုက်လုပ်မိလို့ တော်တော်တိုင်ပတ်သွားပါတယ်အကိုရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီလေးစက် တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ အကိုဆီမှာ အမြဲ လာကြည့်ဖြစ်တယ် ဒီတိုင်းလည်း လာကြည့်ဖြစ်တယ် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
oungnai zaw February 1, 2013 at 9:47 PM
ကျွန်တော်က window7တင်ဖို့ လိုက်ရှာတာ ကိုနေမင်းမောင် ဆီမှာ လာတွေ့တယ်။ တင်တော့ မတင်ရသေးဘူး။ သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို ။ အစ်ကိုလည်း ဒီလို ပညာဒါန လုပ်ပေးတဲ့အတွက် အစ်ကို့ ရည်မှန်းချက်တွေ ဘဝ
မှာ တစ်ခမ်းတနား လှပပြည့်စုံပါစေလို့ ရင်ထဲက စေတနာ အမှန်နဲ့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Aung Bita March 19, 2013 at 12:51 PM
Nay Myo April 11, 2013 at 1:28 PM
ကျေးဇူးပါ ဒေါင်းသွားပါတယ် အဝေးကနေဆိုတော့ အဲဒီတစ်ခွန်းပဲပြောတတ်တယ် ကိုနေမင်းမောင်ကျမ်းမာပါစေဗျာ
motherson zaw May 26, 2013 at 2:38 PM
ဝင်းဒိုးတင်ဖို့ ဒါကို အမြဲအားကိုးနေရပါတယ်။ ကိုနေမင်း အသက်ရှည်ပါစေ။
yemin gyee October 5, 2013 at 1:00 PM
So many post is interesting and get IT knowledge for me. Thanks for sharing knowledge. May i apologize, don't get me wrong " Every Download Link is gone " So ... You should the best sever to store your app and software E book. Thanks..
iten October 11, 2013 at 1:46 PM
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ကျွန်တော် အသိချင်ဆုံးသော နည်းပညာလေးပါ ဒီဝင်းဒိုးတင်နည်းလေးကို စာအုပ်ထုတ်ပေးပါလား စာအုပ်နဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ ဒီအတိုင်းလေးပဲရေးနော် ပုံနင့်တကွပေါ့
iten October 11, 2013 at 1:47 PM